MP4 waa qaab file video aadka u jecel yahay oo waa la jaan qaada dhamaan Qalabka telefoonada gacanta. Waafaqsan yahay ee qaab file MP4 la Qalabka telefoonada gacanta waa mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keentay ay caan ka mid ah dadka. Haddaba dadkii maalin ee soo bixi jecel videos ay MP4 si ay si fudud u ciyaari karaa qalabka ay mobile. Si kastaba ha ahaatee waxaa jira xaaladood marka files MP4 soo bixi waxyeelo iyo waa in la cusboonaysiiyey. Kuwani waa jeer marka aad rabto inaad mar kale si loogu badalo file MP4 si aad u qaab MP4. Beddelaad noocan oo kale ah waxaa loo fududeeyay qaab file diinta baakadaha software. Waxaa jira dhowr ah oo baakadaha software sida laga helaa suuqa laakiin waa in aad doorato oo keliya mid ka mid ah ugu fiican in aad hesho tayo wanaagsan.
Qeybta 1: MP4 Best in MP4 Video Converter
Qeybta 2: MP4 Free in Converter MP4
Qeybta 3: Aqoonta Extended
Haddii aad raadinayso ugu fiican MP4 in MP4 Video Converter, markaas Wondershare Video Converter Ultimate waa xalka ugu fiican ee aad u! Qaab A video file software diinta ka Dhuxul lagu kalsoonaan karo sida Wondershare xaqiiqdii waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu wanaagsan laga helo suuqa maanta! Duwanaansho A ee qorshahan lagu kalsoonaan karo video diinta software ayaa diyaar u ah nidaamka qalliinka Mac aad. Sidaas maleh haddii aad ka shaqeeya Mac ama Windows madal, si fudud aad ku rakiban kartaa software this on your nidaamka iyo bilowdo diinta video / files audio ka mid ah qaabka ay u kale. Waxaad kala soo bixi kartaa Wondershare Video Converter Ultimate halkan: http://www.wondershare.com/pro/video-converter-ultimate.html .
Wondershare Video Converter Ultimate Ayaa tiro ka mid ah muuqaalada oo ka mid ah:
Software wuxuu taageeraa in ka badan 150 oo ay ku jiraan qaabab file maqal ah iyo video labadaba.
Xawaaraha diinta ee Wondershare Video Converter Ultimate xirmo software waa arrin degdeg ah. Marka la barbar dhigo qaab kale file diinta baakadaha software in suuqa, Wondershare Video Converter Ultimate waa ku dhowaad 30 jeer ka dhakhsi badan kuwa kale.
Marka laga reebo diinta videos ka mid qaab file in kale, Wondershare Video Converter Ultimate sidoo kale la muujinta ah siisaa dadka isticmaala si ay u soo bixi videos ah. Wondershare Video Converter Ultimate Bixisaa ah search engine-dhafan kaas oo u sahlaya kuwa isticmaala u raadinta jecel videos ay.
Tiro ka mid ah websites video degsado sida YouTube, vimeo iyo Dailymotion waxaa taageera Wondershare Video Converter Ultimate ah taas oo macnaheedu yahay in aad si fudud u soo bixi kartaa videos ka internetka. Marka aad eegto video aad jeceshahay on websites kuwaas, a badhanka 'download' la helo hoose ee video aad ka arkaysid. Waxaad riixi kartaa batoonka this download inuu ku soo bilowdo download la Wondershare Video Converter Ultimate.
Video tafatirka waa feature aad u muhiim ah oo muhiim ah oo ay taageerayaan ku Wondershare Video Converter Ultimate. By keenidda feature video tafatir ah, Wondershare Video Converter Ultimate uu noqday xirmo software dhamaystiran video maaraynta. Tiro ka mid ah hawlaha tafatir sida falinjeeerka, lana siii iyo qoqobada ayaa diyaar u ah dadka isticmaala ay.
Haddii aad indhaha ku heynaa in ay diinta aad file video MP4 in qaab file MP4 isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate, ka dibna raac tallaabooyinka la siiyo sida hoos ku qoran:
Tallaabada 1 file MP4 u dhigaan si loo roggi
Tallaabada ugu horeysay waa inuu ku soo bilowdo Wondershare Video Converter Ultimate by double gujinaya ay icon. Marka aad ayaa bilaabay software-ka, tallaabada xigta waa in ay ku shuban faylka MP4 video in aad rabto in aad si loogu badalo. Waxaad ku shuban kartaa file MP4 oo haya ama loo doorto 'darto files' doorasho ama ay si fudud u soo jiiday faylka MP4 doonayo galay interface ka. Marka aad riix doorasho 'darto files', waxa la furi doonaa sahamisa file ka kaas oo aad dooran kartaa file la doonayo ah.
Tallaabada 2 Dooro qaab wax soo saarka
Marka aad ku raran yihiin video MP4 in la badaley, waa in aad hadda sheeg qaab wax soo saarka. Sida aad doonayso inaad si loogu badalo qaab MP4 file mar kale dib ugu MP4, waa in aad sheeg qaab wax soo saarka sida MP4 oo kaliya. Waxaad dooran kartaa qaabka wax soo saarka ka 'qaab saarka' tab saxda ah halkaas oo tiro ka mid ah qaabab kale ayaa sidoo kale waxaa laga heli karaa ka.
Tallaabada 3 Edit video ah (Ikhtiyaar)
Wondershare Video Converter Ultimate Siisaa tiro ka mid ah hawlaha tafatirka xiiso leh in dadka isticmaala ay. Si fudud waxaad ka dalban kartaa hawlaha kuwaas on video MP4 ah. Marka aad ku qanacsan tahay fiirin kama dambaysta ah ee video ah, waxaad sii wadi kartaa in aad tallaabada xigta.
Tallaabada 4 bilow raanta
Marka aad ku qanacsan tahay fiirin kama dambaysta ah ee software-ka, waxaad bilaabi kartaa diinta dhabta ah ee video ah. Aad riixdo batoonka 'diinta' hoose ku bilaaban doono diinta dhabta ah ee video ka MP4 in qaab file MP4. Waxay qaadan doontaa dhowr daqiiqo u socodka ah ee diinta si ay u dhamaystiraan ku xidhan tahay tirada video aad diinta. File ayaa sababtay in la kaydin doonaa goobta lagu qeexay aad hore.
Haddii aad raadinayso MP4 si xor ah Converter MP4, markaas Wondershare Video Converter Free waa doorasho kugu habboon!
Wondershare Video Converter Free Gabi ahaanba waa software free kuu ogolaanaya in dadka isticmaala ay si degdeg ah u bedelaan qaab video ah fudayd weyn.
Macaamiisha ayaa ku raaxaysan karaan lacag la'aan ah beddelaad video aan wax lacag ah bixinin hal sida software-ka waa kuu bilaash ah kharashka.
Interface ayaa user ee software-ka waa wax fudud, waayo, dadka isticmaala kas gaab.
Arrintan oo uu weheliyo si degdeg ah xawaaraha diinta, software sidoo kale bixisaa muuqaalada video tafatirka awood badan.
1. Waa maxay sababta dadku u baahan yihiin si loogu badalo ka MP4 in MP4?
Diinta ah file video MP4 dib ugu MP4 mar kale u muuqan yaabaa in aan macquul ahayn in dad badan laakiin waxaa jira xaaladood marka dadku run ahaantii u baahan tahay nooc ka mid ah diinta.
Mid ka mid ah seenyada loo jecel yahay sida waa marka aad soo bixi file a MP4 video dhaawacan internet-ka oo aadan awoodin in aad u ciyaaro. Haddii aadan awoodin in uu ciyaaro file a video burburay, markaas aad si fudud mar kale u bedeli karaan si MP4 video file kaas oo lagu dhiso doono ay audio / video codec iyo hadda aad ku raaxaysan karaan!
Waxaa laga yaabaa jeer marka cabbirka file MP4 waa mid aad u ballaaran iyo aad rabto in waxa laga yaabaa in waxoogaa yar si ay qaadanayso meel yar ee aad disk. In seenyada noocan oo kale ah, si fudud ayaa loo MP4 aad loogu badalo kartaa MP4 mar kaliya si loo yareeyo xajmiga file ay.
Haddii aad rabto in aad wada dhexgalaan laba ama in ka badan MP4 faylasha, markaas aad si fudud u dhexgalaan karaan dhammaan oo Kulansan oo iyaga loogu badalo galay mid ka mid file MP4 hal.
Sidoo kale waxaa jira xaalado kale oo badan oo dadka isticmaala ku dareemaan baahida loo qabo in loogu badalo ah file video MP4 in MP4 dib.
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in MP4 on Windows iyo Mac?